सस्तो पठाओ कसरी भयो टुटलभन्दा महंगो ? – Clickmandu
सस्तो पठाओ कसरी भयो टुटलभन्दा महंगो ?
दिलु कार्की २०७६ असोज ६ गते १६:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बंगलादेशमा लोकप्रियता कमाएपछि नेपालमा १ वर्षअघि भित्रिएको मोटरसाइकल ट्याक्सी कम्पनी ‘पठाओ’ले नेपालमा पनि व्यापार चम्काइरहेको छ ।
राजधानीका सडकमा यात्रु ओसार्ने पठाओको लोकप्रियता यस्तो भइदियो कि एक वर्षमै लाखौं यात्रुहरु यसमा जोडिएका छन् । अहिले हरेक दिन १५ हजारभन्दा बढी यात्रुले पठाओमार्फत यात्रा तय गर्छन् ।
पठाओभन्दा केही समय अघि नेपालमा यस्तै प्रकृतिको सेवा ‘टुटल’ आएको थियो । जसको लोकप्रियता पठाओको तुलनामा भने केही कम छ ।
सुरुमा टुटलले आक्रमक रणीनितमार्फत् बजार विस्तारलाई तीव्रता दिए पनि लामो समय त्यसलाई निरन्तरता दिन भने सकेन । यसको फाइदा पठाओले उठायो र छोटो समयमै टुटललाई उछिन्दै सबैभन्दा अगाडि आइपुग्यो ।
यी कम्पनीको फाइदा के भने, यी यात्रुका लागि सहज बनिदिए । गन्तव्यमा जान नमान्ने ट्याक्सीको समस्याले आक्रान्त यात्रुलाई मोबाइलको एपबाट निमेषभर मै सुविधा पाउँदा सहज भइदियो ।
भनेको समयमा, जति लाग्ने हो त्यति नै मूल्य तिरेर जान पाउने भएपछि यात्रुहरु पनि लोभिए, भनौं न आकर्षित भए । यसले पठाओ र टुटलको बजार छिटो विस्तार गर्न सहज भयो ।
यतिसम्म कि यी कम्पनीको तीव्र बजार विस्तार देखेर ट्याक्सी व्यवसायीहरु आक्रोशित भए र यिनीहरुका विरुद्ध नै लाग्न थाले । प्रहरीले पक्राउ गरी बन्द गर्न समेत खोज्यो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा कम्पनीले पुनः सुचारु भयो ।
टुटलभन्दा पठाओ महंगो
पठाओको भन्दा बेस रेटमा टुटल महंगो देखिन्छ । सुरुको बेसरेट हेर्दा टुटल २० रुपैयाँ महंगो देखिन्छ । प्रतिकिलोमिटर ३ रुपैयाँ महंगो पनि छ । तर टुटलले सरचार्ज लिँदैन ।
त्यसैले पठाओले लिने सरचार्जले यात्रुलाई महंगो शुल्क तिर्न बाध्य बनाउँदै आएको छ ।
ट्याक्सीको बेसरेटमा पनि पठाओले अतिरिक्त १ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर ठगिरहेको यात्रुहरुले बताउँदै आएका छन् । सामान्य ट्याक्सी र पठाओ जस्तै सारथीले अतिरिक्त शुल्क नलिए पनि पठाओले भने मनलाग्दी १ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ । जसमा प्रतिकिलोमिटर २९ रुपैयाँ थपिदै जान्छ भने यसमा राइडरहरुले १५ प्रतिशत सेवा शुल्क पठाओलाई बुझाउनु पर्छ ।
अन्य साधारण ट्याक्सीहरुमा भन्दा शुल्क सस्तो भएकाले पछिल्लो समय पठाओ ट्यासीको लोकप्रियता पनि बढिरहेको छ करिब १ महिना अघिदेखि मात्र शुरु भएको यसमा २ हजार ट्याक्सी राइडरहरुले ३० हजार जनालाई सेवा दिइसकेका छन् ।